कोरोना संक्रमित भएको त्यो दिन
शुक्रवार, आश्विन ९, २०७७ ०२:४२:१९ युनिकोड
सोमवार, भदौ १, २०७७ सत्यकलम संवाददाता
कोरोना संक्रमित भएर म अहिले नेपालकै उत्कृष्ट आईसोलेसन नवलपुरको रजहर स्थित प्राकृतिक चिकित्सालयमा छु । पत्रकार एवम् मेरा हितैषी मित्र रमेश बस्ताकोटीले आईसोलेसनमा यतीकै बसिरहन भन्दा हरेक दिन डायरी लेख्नुस् र त्यसलाई प्रकाशन गरौं भनें , मैले हरेक दिनको लेख्ने कि कसो गर्ने भनेर सोध्दा उनले भने,“हरेक दिन लेख्नुस् , आईसोलेसनका राम्रा अभ्यासहरु , संक्रमितको मनोदशा , मन भित्रका कुरा , लगायत जनचेतना मुलक लेख्नुस् । ” रमेशले यती भनेपछि म लेख्न तयार भए । यसलाई सत्यकलम मार्फत् प्रकाशन गरिने छ । आज पहिलो दिन संक्रमित भएको दिनको मेरो मनोदशा र घटनाक्रमहरु लेखेकु छु ।
श्रावण २३ गते नवलपुरका अधिकांश पत्रकारहरुले कोरना भाईरस परिक्षणका लागि स्वाव दिएका थिए । २५ गते रिपोर्ट आउने दिन थियो । हरेक दिन ४ बजेको समयमा रिपोर्ट आउँथ्यो । स्वाव दिएका साथीहरुमा कौतुहुलता हुनु स्वभाविक हो । त्यसैले पत्रकारहरुको म्यासेन्जर गु्रप गर्माएको थियो । हामी नतिजा कस्तो आउँला भन्ने पखाईमा थियौं । ग्रुपमा जिस्कदै मजाक गर्दे रिपोर्ट कुरिरहेका थियौं । मैले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय नवलपुरका प्रमुख केशब चापागाईंलाई पत्रकारको रिपोर्ट पहिला सार्वजनिक गर्न अनुरोध गरें । २३ गते म स्वाव टेष्ट गर्न छुटेछु मेरो किन नाम परेनछ भनेर मनमनै सोच्दैं थिए । । एक छिनमा म्यासेन्जर गु्रप मार्फत् नै थाहा भयो कि सबै पत्रकारको रिपोर्ट नेगेटिभ आयो । सबै साथीहरु खुशी भए । समाजको अग्रपंक्तीमा रहेर काम गर्दे गर्दा संक्रमित भईयोकी भन्ने चिन्ता सबैलाई थियो । सबै साथीहरुको रिपोर्ट नेगेटिभ आयो । यो नतिजा पछि नवलपुरका अरु पत्रकार संक्रमित छैनन् होला भन्ने आँकलन गरियो किन भने धेरै साथीको नेगेटिभ थियो । म लगायत अरु साथीहरुको स्वाव परिक्षण हुन बाँकी नै थियो ।
२५ गते साँझपख नेपाल पत्रकार महासंघका जिल्ला अध्यक्ष होमराजजी को फोन आयो तपाईको स्वाव शुक्रबार लिने मा राखिएको छ । मैले हुन्छ भने , २६ गते रेडियो सामथ्र्यको बार्षिक उत्सव पनि छ आउनु है भनेर निम्तो पनि दिए । रेडियो सामर्थयले हरेक श्रावण २६ गते बार्षिकोत्सव मनाउने गर्दछ । यो बर्ष हामीले रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरेका थियौं ।
२६ गते बिहान हामी ६ जना पत्रकार स्वाव परिक्षण गर्न मध्यविन्दु जिल्ला अस्पताल गईयो । स्वाव दिएपछि घर आईयो । स्वाव दियपछि बाहिर निस्कन हँुदैन भन्ने थाहा थियो तर पनि लक्षण केहि थिएन त्यस कारण सबै साथीहरु नियमित काममा लाग्नुभयो , म पनि नियमित काममा लागें । रेडियोको रक्तदान कार्यक्रम भएकाले दिनभर जसोनै त्याहाँ व्यस्त भए । २७ गते पनि म नियमित काममानै लागें । अहिले लागिरहेको छ स्वाव दिएपछि मैले हिंडडुल गरेर गल्ति गरें । तर सबैले त्यसै गरेका थिए , म पनि समाज भन्दा अलग किन हुन्थें र मैले पनि त्यसै गरें । अहिले त्यो गल्ती भयो भन्ने मलाइ लागेको छ । ग्लानी पनि भएको छ ।
साउन २८ गते दिउसो ४ बज्न लाग्दा फेरि पत्रकारको समुहमा कौतुहलता छाउन थाल्यो , एकाएक म्यासेन्जर गु्रप तात्यो , आज कसको कसको रिपोर्ट के आउने हो भन्ने कौतुहुलता सबैलाई थियो । म्यासेन्जरमा मैले साथीहरु संग जिस्कदै भने, “ लागेछ भने कोरना विमाको १ लाख आउँछ लगभग दिनको ७–८ हजार पर्छ , अहिले समाचार लेखेर त्यति आम्दानी गर्न सकिन्न , अलि दिन रजहर आईसलोसनमा बसेर फ्रेस भयर आउला , आत्तिनु हुँदैन पोजेटिभ नै आएपनि केहि हुन्न । ” पत्रकारहरु बिच हाँसो मजाक चल्दै थियो ।
साथीहरु संग जिस्कदा जिस्कदै मेरो मोवाईलमा घण्टी बज्यो , फोन गर्नेले सोध्नुभयो,“ घर हुनुन्छ कि बाहिर ?” मैले घरै छु भने । फेरी भनियो ,“आज कतै जाने कार्यक्रम त छैन ? मैले छैन भने ।
त्यसपछि मलाई मनमनै शंका लाग्यो कतै मलाई नै कोरना संक्रमण त भएन ! झसङ्ग भए , अरु साथीको चित्त बुझाउदै गरेको म एक्कासि सफा मौसममा बादल मडारिए जस्तो भयो , पृथ्वी भासिए जस्तो लाग्यो । हात खुट्टा काम्न थाले , पोजेटिभ देखिएपनि आत्तीनु हुन्न भन्ने थाहा भएपनि एक्कासि खबर सुन्दा कहाँ त्यस्तो हुँदो रैछर , संसारनै पुरै अध्यारो भयो । परिवार सगै भएकोले आफुले आफुलाई सम्हाल्दै परिवारमा शेयर गरे । मेरो शरीर स्वस्थ देखेर होला घर परिवारले पत्याएनन् । मजाक गरेको ठाने । मैले हैन फोन आयो रिपोर्ट पोजेटिभ आएछ भने , श्रीमती मलिन भईन् , छोरीको मुहारको चमक हरायो । छोरो सानै भएकाले धेरै कुरा बुझेन सायद । मैले मेरो कपडा निकाल्दिन भने, आफुलाइ सम्झाउने कोहि भएनन् , परिवारलाई आफै सम्झाउन थाले न आत्तीनु केहि हुँदैन । यो सामान्य हो । १५ दिनमा निको हुन्छ भने । मेरो केहि कपडा निकालिदिए , अब म आईसोलोशन जान मानसिक रुपमा तयार भए र नगर स्वास्थ्यलाई फोन गरें र भनें,“मेरो घर एम्वुलेन्स नपठाउनु म मेरै गाडिमा जान्छु ।” नगर स्वास्थ्य शाखाले जिल्ला स्वास्थ्यलाई भन्न भने , जिल्लामा भनेको सिडयो सर संग कुरा गर्न भने , सिडियो सरको ३० मिनेट सम्म फोन व्यस्त भयो , फोन यता र उता , उता र यता गरे निचोड पाउन सकिन , त्यही बिचमा केहि साथीको फोन आयो , उनिहरुले सान्त्वना दिए । त्यसपछि मलाई लाग्यो म संक्रमित भएको कुरा लुकाउन हुँदैन । किनकी म पत्रकार हुँ धेरै ठाउँमा पुगेको छु । मैले आफ्नो अबस्था बारे जानकारी दिएपछि सबै सर्तक हुन पाउँछन् । समाजलाई गुमराहमा मैले राख्न हुँदैन भन्ने लाग्यो र म संक्रमित भएको कुरा फेसबुक मार्फत नै सार्वजनकि गरें । म आफ्नै गाडी लिएर रजहर आए ।
यहाँ आउदा मानसिक थकानले गर्दा शरीर तातो भयको अनुभव गरे र अस्पतालका निर्देशक डा विनोद पौडेललाई जानकारी गराए । उहाँले मेरो मन भित्रको त्रासले गर्दा त्यस्तो भएको बताउनु भयो । ज्वरो पनि नापियो साच्चिकै वनको वाघले हैन छ मेरै मनको बाघले ज्वरो उव्जायको रहेछ ।
मलाई बसाईको लागि भिन्न कोठाको व्यावस्थापन भयो । म यहाँ आउदा ४ जना हुनुहुन्थ्यो । खाना खाए, बेडमा गए मनमा कुरा खेलि रह्यो , कहाँ बाट मलाई पोजेटिभ देखियो विगत १५ दिन देखिको आफ्नो ट्राभल हिस्ट्री भेटेका मान्छेहरु सम्झने कोसिस गरे , खासै कतै गएको पाईन सोच्दा सोच्दै राति १२ बजे निदाएछु । अरु धेरै कुराहरु छन् लेख्न पर्ने । अर्को भागमा अरु लेखौंला । म नियमित डायरी लेख्न मानसिक रुपमा तयार छु । सत्यकलम मार्फत यहाँहरुका बिचमा जनचेतनामुलक सन्देशहरु पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।
( कोरोना संक्रमित भएर आईसोलेसनमा रहेका पत्रकार सागर पोख्रेल रेडियो सामथ्र्य कावासोतीका प्रवन्ध निर्देशक र सामथ्र्य साप्ताहिकका प्रकाशक हुन् , उनको अनुमतीमा उनका अनुभुती यहाँ प्रकाशन गरिएको हो ।)
प्रकाशित मिति: सोमवार, भदौ १, २०७७, ०६:३२:००
कोरोना संक्रमण र संचारकर्मीको खाना
आईसोलेसनमा जन्मदिन ...